Number of Rakhine displaced on the rise | ETHNICS VOICE ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
Number of Rakhine displaced on the rise
AA . Arakan . Burmese Army . Fighting . NEWS
Reporter Lun Min Mang @ Myanmar Times
A volunteer aid convoy that took food to villagers displaced by heavy fighting in Rakhine State between government troops and fighters of the Arakan Army (AA) says the number of displaced has risen on initial estimates.
Aid supplies are unloaded fromaboat in Sapa Seik village, Kyauktaw township, where more than 500 people displaced by fighting have taken refuge. Photo: Supplied
The aid convoy, which was blocked by Tatmadaw troops for three days as it attempted to make its way to the conflict zone in Kyauktaw township, was later allowed to proceed, though soldiers allowed only three men to take in the food. Organisers have revised upward their initial estimate of 450 people at risk by more than 120.
Ko Zaw Win, one of the volunteers allowed to proceed, told The Myanmar Times yesterday that police officers had put the number of displaced at 574. The displaced families had been resettled in local schools, and Ko Zaw Win said the group had been told they were not allowed to leave the village of Sapa Seik.
“We donated 32 bags of rice, 50 mosquito nets, 10 packs of potatoes, salt and some other cooking ingredients. We didn’t receive many donations and we couldn’t take much food,” he said.
The committee is now planningareturn to Sapa Seik village with more food, provided the authorities allow more volunteers to enter the conflict zone next time.
“We are collecting food and other necessary supplies in order to return within the week. But it also depends how much we can collect, and how quickly we can collect it,” said Daw Hla May, chair of Kyauktaw Women’s Network andamember of the committee formed to help local residents affected by the fighting.
She said civil society organisations and community-based networks from Sittwe were joining the committee in Kyauktaw to donate aid to Sapa Seik.
“The government hasaresponsibility to send assistance to the camps. Our committee expects the military to lift restrictions so that more volunteers are allowed in,” she said.
The Rakhine State Army, an umbrella armed group that shares the name Arakan Army, issuedastatement on April 25 urging the government to follow the international military code of conduct and rules of engagement, not to attack civilians, and to allow aid convoys to reach people affected by the fighting. Government officials could not be reached for comment yesterday.
Rakhine National Party leader U Aye Maung said the government should send more supplies to the camp.
“We met with some officials from the state government about four days ago. They said they had sent supplies to the camp,” he said. “They should send more.”
၂၀၁၅-ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့မှစ၍ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိ
ပြီး ထိတွေ့မှု(၁၀)ကြိမ် ခန့်ရှိခဲ့သည်။ ဤတစ်လနီးပါး တိုက်ပွဲကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ရက္ခိုင်ရွာအချို့အား အတင်းဝင်ရောက် မွှေနှောက်ပြီး ရပ်မိရပ်ဖ၊ ရပ်ရွာလူကြီးများအပါအဝင် အပြစ်မဲ့ရွာသူရွာသားများအား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ရွာသားများပိုင်ဆိုင်သော ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား အပါအဝင် စားနပ်ရိက္ခာများအား ဖျက်ဆီးယူဆောင်သွားခြင်း၊ လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ပြုမူခြင်း၊ ဥပဒေနားမလည်သော ရွာသူရွာသားများအား ဥပဒေဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ လူ့အခွင့်အရေးများချိုးဖောက်ခြင်း၊ စစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုများကျူးလွန်ခြင်း၊ ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ခြင်းများကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ဤကဲ့သို့သော မြန်မာ့တပ်မတော်၏လုပ်ရပ်များမှာ တိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးတွင် လုပ်လေ့လုပ်ထ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်များသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် အလားတူကိစ္စရပ်များအား ထပ်မံကျူးလွန်နိူင်သည်ကို နိူင်ငံတကာသံရုံးနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်း ခန့်မှန်းသိရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ထပ်မံကျူးလွန်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ရက္ခိုင်လူမျိုးအပေါ် ဤကဲ့သို့သော ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များ၊ ခါးသီးစရာကောင်းသော လုပ်ရပ်များကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ပြုမူကျူးလွန်နေခြင်းမှာ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အောက်ခြေရဲဘော်များ၏ ဒေါသစိတ်အားနှိုးဆွပေးခြင်း၊ ရက္ခိုင်လူမျိုးများအား စော်ကားခြင်းနှင့်တူကာ မလိုလားအပ်သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်ပေါ်နိူင်ရန်အတွက် တွန်းအားများအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေသည်။
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ပါဖြစ်စဉ်များ၌ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့်
မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ရက္ခိုင်လူမျိုးများ၊ မြန်မာနိူင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ရက္ခိုင်လူမျိုးများအနေဖြင့် မိမိတို့လူမျိုးများအား အခြားလူမျိုးတစ်မျိုးမှ ယခုကဲ့သို့ မတရားသဖြင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၊ ရိုက်နှက်ခြင်းများအား ကျူးလွန်နေသည်ကို လက်ပိုက်ကြည့်နေမည့်အစား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ထို့အပြင် အခြားသော ရက္ခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ငယ်များအား မိမိတို့ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့်အတူ အမျိုးသားရေးအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များ၊ နိူင်ရာတာဝန်များကို လုပ်ကိုင်နိူင်ရန်အတွက် အမျိုးသားရေး ဘုံအကျိုးစီးပွားများကို ဦးထိပ်ထား၍ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် လာရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိူင်ရန် ဖိတ်မန္တကပြုလိုက်ပါသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်သည် နိူင်ငံရေးကိုအခြေခံ၍ မိမိလူမျိုးများ ရသင့်ရထိုက်သည်များကို ရရှိနိူင်ရန်အတွက်
ရက္ခိုင်လူထုနှင့်အတူ လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ရက္ခိုင်လူထုများအနေဖြင့်လည်း ယခုရက္ခိုင်ပြည်အတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော တိုက်ပွဲများသည် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ တိုက်ပွဲများသာဖြစ်သည်ဟု မယူဆစေလိုဘဲ ရက္ခိုင်မျိုးနွယ်စု၊ ရက္ခိုင်လူထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် တိုက်ပွဲဝင်နေသော တိုက်ပွဲများအဖြစ် မှတ်ယူရန် လိုအပ်သည်။